Wasiirka Howlaha Guud: Dhisme kasta waa in loo saameyo adeegyo saacidaya naafada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
4th June 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Wasiirka Howlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta, Saalax Sheekh Cusmaan ayaa amaray in dhismayaasha guud iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ay khasab ku tahay in ay sameeyaan meelo dadka naafada ah ay ka geli karaan, musqulo ay ku xaajoon karaan iyo meelo u gaar ah oo ay baabuurta naafada ah kaliya la dhigo.
Wasiir Inj. Saalax Sheekh Cismaan ayaa hadalkaas ka yiri shir jaraa’id oo lagu qabtay xarunta Wasaaradda, xilligaasoo uu Wasaaradda booqday Maxamed Cali Faarax oo ah muwaadin u dooda xuquuqda dadka naafada ah ee Soomaaliyeed.
“Bani aadamka Alle ayaa karaameeyay, in aan annaga karaameyn weyno waa wax aan fiicneyn. Waxaan farayaa dhamaan dadka iyo shirkadaha dhisanaya dhismayaasha guud iyo kuwa gaarka ah in ay sameeyaan meelaha dadka naafada ah ay ka gali karaan dhismayaasha sida kuwa danta guud, masaajidyada, musqulaha guud iyo xawaaladaha.” Ayuu yiri Inj. Saalax Sheekh Cismaan.
Dhanka kale, Maxamed Cali Faarax oo isaga shirka jaraa’id ka hadlay ayaa sheegay in dadka naafada ah ay qabaan dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay in gurigiisa mooyee uusan dhismayaasha kale ka helin musqul uu geli karo ama uusan sida dadka kale uusan fursad u heli karin in uu meelo ka mid ah goobaha dadweynaha galo.
“Markii aan arkay baahiyaha badan ee naafada heysato ayaa khasab noqotay inaan bilaabo olole aan xuquuqda dadka naafada ah ku raadinayo, Mararka qaar aniga oo magaalada jooga haddii aan u baahdo xaajo maleh musqul aan galno, waa inaan gurigeyga ku soo xaajoodaa, dadka naafada ah haddaan nahay waxaan codsaneynaa in xil la iska saaro xuquuqdeena, Naafanimadu ma aha macnaheedu inaana waxba qabsan karin” ayuu yiri Maxamed Cali Faarax.
Waxaa lagu qiyaasaa dadka naafada ah ee dalka Soomaaliya qiyaastii inta u dhaxeysa 12-20%, Sidoo kale wax ka yar 1% ayaa taga goobaha waxbarashada, halka qaar badan aysanba soo gelin gudaha goobaha dadku badan yihiin, culeysyo soo wajahaya aawgood.
Siidii: Wanlaweyn iyo Toora-toorow waa la isku furay